विजय गच्छेदारसँग पराजित भगवती चौधरी भन्छिन् : धाँधली भो भोलि अदालत जान्छु
Thursday, 14 Dec, 2017 3:58 PM
सुनसरी क्षेत्र नंं. ३ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएकी एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीले पुनः मतगणनाको माग गर्दै अदालत जाने बताएकी छिन् । मतगणनाका क्रममा सुरुवातदेखि नै अग्रता लिँदै आएकी चौधरीले अन्तिम समयतिर आएपछि विजय गच्छदारसँग ३ सय ६२ मतान्तरले पराजित भएपछि धाँधली भएको दाबी गरेकी हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सिडियो तथा प्रहरीको मिलेमतोमा आफुलाई पराजित गराइएको दाबी गर्दै उनले अब न्यायका लागि अदालत जाने सोच बनाएकी हुन् । चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :
तपाई झिनो मतान्तरले पराजित हुनुभयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नक्कली मुचुल्का बनाए, मतगणनाका क्रममा व्यापक धाँधली गरियो । तपाईंले वडा वडामा गएर सर्वेक्षण गर्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ यहाँ कसको लोकप्रियता छ भनेर । यहाँको एसपी, सिडियो, निर्वाचन अधिकृत मिलेर धाँधली गरे । सिडियो स्पटमा देखिएनन् । एसपी विद्यानाथ स्वयं रुखमा छाप लगाउनुस भनेर मैदानमा खटिए । इन्सपेक्टरहरु पनि त्यसैगरी लागे । म इन्सपेक्टरहरुको नाम भन्छु, शेषनारायण, मेघराज थापा, शैलेस न्यौपाने, ढुन्डी गिरी हुन् । ढुन्डी गिरी र शैलेश न्यौपानेलाई चुनाव हुनु पाँच छ दिन अघि सरुवा गरेर ल्याएइको थियो । सन्तोष पोखरेल इन्सपेक्टरलाई रक्सी खाएर झगडा गरेको आरोप लगाएर निकाल्दै शेषनारायणलाई ल्याएको थियो । सन्तोष पोखरेलले गच्छेदारको कुरा टेरेनन् । गच्छेदारको घरमा बोलाइरहेको थियो, त्यहाँ जान नमानेपछि उनलाई चाँही उनैको मान्छे लगाएर रक्सी खुवाएर त्यसलाई निकाल्न लगायो । चुनाव सकिएपछि इन्सपेक्टर शैलेस न्यौपानेले पाँच थान मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नलगेर आफ्नो कार्यालयमा लगेका थिए । हामीले थाहा पाएर तुरुन्त लगिहाल्नुस भन्दा भन्दै पनि अटेर गरेर पछि लगेको थियो । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर धाँधली भएको छ ।
धाँधली भएको दाबी गरिहनुभएको छ, अब के गर्नुहुन्छ ?
अब कोर्टमा जाने हो, कानुनी उपचार लिने हो, म सांसद बन्न पाँउदिन भने उसले पनि पाँउनुहुँदैन । उ जनताको अभिमतले जितेको हैन, धाँधली गरेर जितेको हो । चुनावको बीचमा प्रहरीको सरुवा गर्यो । हाम्रो मान्छेलाई त्यो एसपीले पटक पटक सार्वजनिक अपराधको मुद्धा लगायो । इन्सपेक्टर, सई, असई सबै आचारसंहिता विपरित सरुवा गरेर ल्यायो । एसपीलाई अगाडि नै ल्याएको थियो । अरुलाई एक हप्ताको बीचमा ल्याएको थियो ।
तपाईं अघिल्लो पटक पनि त पराजित हुनुभएको रहेछ नि ?
अघिल्लो पटक पनि मत गन्नेले नै मेरो धेरै मत बदर गराईदियो । लाइन नछोएको मतलाई पनि बदर भन्यो । यसपाली पनि मत गन्न ढिलो गर्यो , हामीले छिटो छिटो मत गनिदिनुस भनेका थियौँ, किन ढिला गर्यो भनेको यिनिहरुको सेटिङ मिलिसकेको रहेनछ । निर्वाचन अधिकृतलाई किनिसकेपछि मात्र उनीहरुले छिटो छिटो गन्न भन्न थाले । अर्धकट्टी सहितको मतपत्र फेला परेपछि त्यसको सिरियल नम्बर चेक गर्न खोज्दाखेरी त्यो पनि हेर्न दिएनन् । गोपनीयता भंग हुन्छ भने । के को गोपनीयता भंग हुन्छ, जनताले सुचनाको हक पाँउछन् भने म त उम्मेदवार हुँ । तपाईहरुले अर्धकट्टी सहितको मतपत्रमा रुखको मत सदर गर्नुभो, मैले हेर्नपाँउनुपर्छ भनेर माग गर्दा पनि अटेर गर्यो । निर्वाचन अधिकृत टिकाभुषण घिमिरे र मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तम दाहालले हेर्न दिनुभएन । हरेक बुथबाट तीस चालीस वटा मत बदर गरिदियो ।
अब तपाईं के गर्नु हुन्छ त ?
जति मत बदर गराएको छ, त्यसको फेरि गणना हुनुपर्छ । पुनःमतगणना भयो भने हुन्छ । सूर्य चिन्हमा छाप लागेको मतपत्रमा २० रुपैयाँ भेटियो भनेर पनि बदर गर्यो रे । त्यो कसरी भेटियो, हाम्रा प्रतिनिधिलाई किन देखाएन् । मतपत्रमा गम लगाएर, स्टिच लगाएर टाँसेको त थिएन् । त्यस्तो पनि साना तिना हरेक कुरा देखाउँदै बदरको बदर गर्यो । त्यो सूर्य चिन्हको २० रुपैयाँ त भन्न मिलेन नी । अरु मतपत्रको पनि होला । हामीले अर्धकट्टी सहितको मतपत्र भेटाँउदा त्यसको सिरियल नम्बर चेक गर्न पनि दिएन् । जति पनि त्यो बुथमा मत खसेको थियो, अर्धकट्टी सहितको मतपत्र फरक थियो र हामीलाई चेक गर्न नदिएको होला । अनि एउटै खालको औठाछाप मतपत्रको अर्धकट्टीमा थियो । कोही भोटरले त सिग्नेचर पनि गर्छ, फरक फरक खालको औठाछाप पनि लगाँउछ, तर सबैमा एउटै थियो । त्यसैले हामीले शंका लागेर चेक गर्न दिनुस भन्यौँ तर दिएनन् । अब न्यायको लागि मुद्दा त लड्नुपर्छ । हामीले सबै तथ्य जम्मा पार्दैछौँ । प्रेस विज्ञप्ति पनि गर्छौँ । भोलि काठमाडौं आएर कानुनव्यवसायीहरुसँग सल्लाह गरी सर्वोच्चमा वा संवैधानिक अदालतमा मुद्दा हाल्छु ।